“बेहुली भएर डोली चढ्दा रुन्छौ की रुदिनौ ?” | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
Home बेनी नगरपालिका “बेहुली भएर डोली चढ्दा रुन्छौ की रुदिनौ ?”
“बेहुली भएर डोली चढ्दा रुन्छौ की रुदिनौ ?”
बैशाख ८ गते । जलजला गाउँपालिका ४ लुङ्दीका युवा सर्जक सुमन केसीको मुक्तक संग्रह “श्री”को शनिबार बेनीमा चर्चा गरिएको छ । म्याग्दी साहित्य सञ्चार र अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज धौलागिरीले बुलबुलमा सुमन नाम दिएर आयोजना गरेको कार्यक्रममा कृत्तिको समालोचना, चर्चाका साथै रचना बाचन समेत गरिएको थियो ।
चैत १९ गते पोखरामा बिमोचन भएको श्री मा प्रेम, बिछोड, मानव जिवन, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश लगायतका विषयसंग सम्बन्धित १०५ वटा मुक्तक रहेका छन् । सञ्चारकर्मी समेत रहेका केसीको पहिलो मुक्तक संग्रह श्री उर्वर साहित्यको कृति भएको समिक्षक गंगा बानियाँले बताउनुभयो ।
विद्यालय पढ्दा देखिनै साहित्यीक कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका केसीले पोखरामा अग्रज साहित्यकारहरुको भेटघाट र प्रेषणाबाट प्रभावित भएर मुक्तक प्रकाशन गरेको बताउनुभयो । पहिलो कृतिबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको बताउँदै केसीले कथा र उपन्यास लेखनको तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
संगहका दश वटा मुक्तक बाचन गरेका केसीले मुक्तकबाटै प्रेम भाव प्रकट गर्नुभयो । “बिहान सधै बाबा आमाको पाउ छुन्छौ की छुदैनौ ?
मैलो हुदाँ कहिले काँही लुगा पनी धुन्छौकी धुदैनौ ?
भैगो यी कुराले निराश पार्दीन, डर पनि देखाउँदिन,
बरु भन बेहुली भएर डोली चढ्दा रुन्छौ की रुदिनौ ?”
दुई घण्टासम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा गजलकार शिव पंगेनी (प्रकट)ले तिन वटा गजल प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
“शुद्ध, कोमल, कन्चन आहा नुहाएर के निस्कीयौ ?
भाग्यमानी रैछ साबुन फिजै फिजले बरालीयो,
जुन सावुनले अंग अंग छुवाएर के निस्कीयो ?
तप्प तप्प जलबिन्दु चुहाएर के निस्कीयौ ?
पानी पनी आगो बन्यो कामदेवको आसिस पाउँदा
जुन पानीमा यस्तो रुप डुवाएर के निस्कीयौ ?”
पंगेनीले गजल मार्फत कुनै सुन्दरीको चर्चा गर्दा सहभागी उत्साहीत देखिन्थे । कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरिक्षक बसुन्धरा खड्काले मासिनलाई उर्जाशिल र समाजलाई नयाँ आयाम दिन साहित्यको महत्वपूर्ण योगदान भएको चर्चा गर्नुभयो । कार्यक्रममा साहित्यकारहरु रेखाकौशल रेग्मी, घायल श्री, गणनाथ पौडेल लगायतले रचना वाचन गर्नुभएको थियो ।
म्याग्दी साहित्य सञ्चारद्धारा प्रकाशित बुलबुल साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक चन्द्रबहादुर लामीछानेको अध्यक्षता, हिरा शर्मा (संघर्ष)को सञ्चालन र अनेसास धौलागिरीका सचिव रञ्जाना श्रेष्ठको स्वागत मन्तब्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा सन्दिप शर्माले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।